हे दैव यो के गर्यौ, यि बालिका ज्या,न यो सर्प ले, रिप लेख्नुहोला ! – Dainik Sangalo
हे दैव यो के गर्यौ, यि बालिका ज्या,न यो सर्प ले, रिप लेख्नुहोला !
प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन २६, २०७८ समय: २०:३१:५३
सघन वर्षापछि केही दिनयता चर्को घाम लाग्ने र छिनछिनमा पानी पर्ने क्रमसँगै महोत्तरी जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा सर्पको बिगबिगी निकै बढेको छ । बर्खाकालमा पानीले दुला भरिएपछि बाहिर निस्केका सर्पको अहिले बिगबिगी बढेको हो । बर्दिवास–३ गौरीडाँडास्थित सर्पदंश उपचार केन्द्रमा अहिले सर्पदंशको उपचार लिन आउने दिनदिनै बढेका छन् ।
Last Updated on: August 10th, 2021 at 8:31 pm